यस्तो पो बोका ! एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख ! | Rajmarga
यस्तो पो बोका ! एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख !
काठमाडौ । गाउँघरमा एउटा बोकाको मूल्य कति पर्ला? नवलपरासीको एक ब्यवसायिक बाख्रापालन फर्ममा एउटा बोकाको मूल्य ३ लाख छ। नवलपरासीको हर्कपुरमा रहेको बगैंचा फर्म हाउसमा अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएको अष्ट्रेलियन बोयर जातका बाख्रा छन्।
वीरभद्र आचार्य अमेरिका बसेका, अशोक शर्मा पौडेल ६ वर्ष डेनमार्क बसेका र धिताल अष्ट्रेलिया बसेपनि बाख्रापालनको योजना बनाउञ्जेल पशु र कृषि सम्बन्धि कुनै अनुभव थिएन। ‘एउटै बोकाको २ लाख ६० हजार मूल्य तिर्‍यौं,’ धिताल भन्छन्, ‘अहिले वार्षिक ४० लाख आम्दानी छ।’ उनीहरुको फर्महाउसमा यतिबेला १ सय ६० वटा बाख्रा छन्। ४ बिघामा उन्नत जातको घाँसखेती छ।
बोयर जातको बिशेषता जन्मेको ३ महिनामा कम्तिमा २६ किलो र वर्षदिनमा १३० देखि १५० किलोसम्म वजन हुने उनले बताए। बोयर जातको बाख्रा दैनिक २ सय ग्रामका दरले बढछ। बोका र पाठी बढा लम्बाइ बढ्छ। अग्लो हुँदैन, खँदिलो हुन्छ। मासुको स्वाद रैथाने जस्तो तिख्खर हुँदैन। बोसो नहुने र कोलेस्ट्रोल कम हुने हुँदा जुनसुकै रोगका लागेकाले पनि खान उत्तम मानिने भएकाले बजारमा माग बढ्दो छ। तर, फर्म सञ्चालकहरूको उद्देश्य मासु बेच्नु भने होइन।
उन्नत जातका बोका र रैथाने बाख्रा क्रस गराएर उन्नत नश्लका पाठापाठीको उत्पादन बढाउनु हो। त्यसका लागि उनीहरुले ओखलढुंगा, झापा, रामेछाप, तनहुँ, बुटवल, बैतडी र नवलपरासीका दुई ठाउँमा बाख्रापालन सुरु गरेका छन्।
रैथाने जातका खसीबोका एक वर्षसम्म पाल्दा ३० देखि ४० किलो तौलका मात्र हुन्छन्। खुवाइएको तुलनामा मासु कम हुन्छ। तनहुँको बन्दिपुरमा सरकारले ४० वर्षअघि खोलेको बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रमा त्यस्तै जातका बाख्रापालन गरिएपनि ब्यापकता पाउन सकेको छैन। यही परिबेशमा उनीहरुको फर्म हाउसमा हुर्काइएका खसीबोकाको माग भने बढी छ। कान्तिपुरमा खबर छ।
Previous post: सार्वजनिक संस्थानले सम्पत्ति बेचेर ऋण तिर्न नपाउने
Next post: ५ दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका वेबसाइटमा ह्याकरको पहुँच